AirAttack, n'efu maka obere oge Mac App Store | Esi m mac
AirAttack, n'efu maka oge dị oke na Mac App Store
Ikuku bụ otu mpempe egwuregwu dakọtara na iOS y oS X, Onye mmeri nke onyinye 'Unity Awards 2010' nke kachasị eri ahụ, nke na-enwekarị ọnụ ahịa 0,99 €, na nke obere oge bụ kpam kpam n'efu. Egwuregwu bụ ikuku ọgụ, ahụkarị égbè egwuregwu na pụtara 3D ndịna-emeputa, yana oké ụda, na punchy mmetụta.
AirAttack na mgbakwunye na ịdị maka OS X, dịkwa maka iPad na iPhone. AirAttack abụwo nọmba 1 na ugwo Apps na ihe karịrị mba 50. Na reviews nke egwuregwu bụ ikpọ, omume maka ndị niile na-ege ntị ka ọ na-enye gị nhọrọ ịmegharị ya na nsogbu niile.
10 Nnukwu Ozi.
Enemiesdị ndị iro 64.
Ọtụtụ nkwalite na ngwá agha pụrụ iche.
3 ụgbọ elu dị iche iche
Incredible ọkụ na pụrụ iche utịp.
3 nsogbu ụdịdị.
Arcade na ọnọdụ lanarị.
Physics na ozugbo.
Akwa na-emebi emebi na ụlọ.
Ọnọdụ dị mma (3D dị ịtụnanya).
10 nnukwu nso bosses larịị.
3 ofdị njikwa: keyboard, òké, Gamepad.
Onye Mmepụta: Art Na Egwuregwu.
Mmekọrịta: OS X 10.6.6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Download 'Ikuku' kpọmkwem site Mac App Store site na njikọ dị n'okpuru.
Anyị tinyekwara njikọ iji budata 'Ikuku' si App Store ibudata ya maka iOS, ka I wee budata ya iPhone e iPad. Njikọ dị n'okpuru bụ maka iPhone na iPod Touch, na n'okpuru anyị na-etinye njikọ iji budata ya HD maka iPad.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » AirAttack, n'efu maka oge dị oke na Mac App Store
A na-akwado Apple TV ọhụrụ ahụ site na ngwa ngwa